मलामी जान बिर्सेछऊ त ? – Ratopati News
Ratopati News६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार १८:५८
यदि चेतना भएको गाउँको सदस्य हो भने ऊ जुनसुकै व्यक्तिको पनि मलाम जान्छ र शोकाकुल परिवारलाई सान्त्वना दिन्छ । यदि जनप्रतिनिधहरु नै समाजमा कोही निधन हुँदा मलाम जाँदैन भने आउने चुनावमा उसलाई भोट पनि नहाल्दा राम्रै होला । किनकि समाजलाई सकारात्मक दिशामा लैजानको लागि जनप्रतिनिधिको ठूलो हात हुन्छ यस्तो अबस्थामा उनीहरुले नै घात गरेपछि केको भोट हाल्नु ? त्यसैले प्रिय मित्र मर्दा पर्दा समाज काम लाग्छ । तपाई गाउँ समाजको लागि काम लाग्ने व्यक्ति बन्नुहोस् । तपाईँलाई पनि जन्ती चाहिन्छ अनि तपाईलाई नै मलामी चाहिन्छ ।
अबको राजनीतिक मार्गचित्र
१२ आश्विन २०७७, सोमबार १०:५७
अस्थिरताको भुमरीमा नेपाली राजनीति
७ पुष २०७७, मंगलवार ०५:०१
२७ चैत्र २०७८, आईतवार २०:२८